Mgbakwụnye akwara kacha dịrị nchebe: Urolithin A (UA) ntụ ntụ AASraw
/blog/gallery/Mgbakwụnye akwara kacha dịrị nchebe: Urolithin A (UA) ntụ ntụ
Ihe na 03 / 28 / 2022 by Mmmmmmmmmmmm dere na gallery.
1. Kedu ngwaahịa nwere ike inyere anyị aka ịkwalite akwara ngwa ngwa?
2. Tụnyere Steroid, Gịnị bụ Uru Urolithin A (UA)?
3. Kedu ihe bụ Urolitin A (UA)?
4. Kedu ka Urolithin-A si arụ ọrụ n'ịkwalite akwara?
5. Ebe ịzụta kacha mma Urolithin A (UA) ntụ ntụ Online?
6. Kedu otu esi eji Urolithin A (UA) ntụ ntụ?
7. Kedu nsonaazụ anyị nwere ike ịhụ mgbe Urolithin-A ntụ ntụ?
Otu n'ime isi ihe mgbaru ọsọ nke bodybuilders na ndị na-eme egwuregwu bụ ịba ụba uru ahụ siri ike ma melite ụda, yana ike, nke uru ahụ. Ọ nwere ike isiri ike nweta nsonaazụ a site na mgbatị ahụ ma ọ bụ mmemme ọzụzụ naanị. Atụmatụ nri siri ike, iri nri macronutrients dị mkpa, na iji ụfọdụ mgbakwunye mgbatị ahụ na mgbatị ahụ gachara ka achọrọ ka enwee uto akwara zuru oke na oge a kara aka.
Kedu ngwaahịa nwere ike inyere anyị aka ịkwalite akwara ngwa ngwa?
Enwere ọtụtụ ụzọ isi meziwanye uto akwara gị wee hụ mgbanwe dị ukwuu na ahụ gị, nke kachasị mkpa bụ iri protein zuru oke. Nri protein na nri ọ bụla nwere ike ịbara uru ahụ gị uto, n'ihi na amino acid sitere na protein ndị a na-enyere aka mezie mmebi ahụ ma mejupụta protein dị na mọzụlụ, mgbe mgbatị ahụ gasịrị. E kwesịrị izere carbohydrates n'ozuzu, ma e wezụga mgbe mgbatị ahụ gasịrị mgbe uto muscle bụ ihe mgbaru ọsọ.
Ụzọ ọzọ dị ngwa iji kwalite uto akwara bụ iji steroid. Ha na-enwetakarị aha ọjọọ dị ka ụfọdụ n'ime ụdị steroid amachibidoro maka onye ọ bụla na-arụ ọrụ ahụ ma ọ bụ onye na-eme egwuregwu site n'aka ndị ọchịchị metụtara ya. Otú ọ dị, e nwere ọtụtụ ụdị ndị ọzọ dị mma na nke iwu kwadoro iji, nke egosikwara na ọ bara uru site na ọtụtụ nchọpụta sayensị.
Enwere ike itinye steroid n'elu, ma ọ bụ were ya n'ụdị pill ma ọ bụ ntụtụ, ozugbo n'ime akwara. Ebumnuche nke steroid ndị a abụghị naanị ịbawanye oke uru ahụ, ya mere na-ebute mmụba dị ukwuu nke uru ahụ kamakwa ịbawanye ike nke uru ahụ. Ndị na-arụ ọrụ ahụ na-eji steroid na-akọ mmụba na ume na ntachi obi na mgbatị ahụ, nke bụ n'ezie mgbakwunye na nkwado nke steroid.
Tụnyere Steroid, kedu uru Urolithin A (UA) bara?
Ọ bụrụ na ihere dị n'akụkụ ndị steroid na-apụnara gị ma ị na-achọ ihe ọzọ, mgbe ahụ Urolitin A mgbakwunye nwere ike ịba uru ileba anya. Urolithin A ntụ ntụ bụ ihe na-eme ka akwara dị ike ma dị nchebe, uru nke ihe akaebe sayensị kwadoro. Uru nke nkwalite ahụ ike a ugboro ugboro ma nwalee n'ọtụtụ ọmụmụ dị iche iche, onye ọ bụla akwadola uru ndị a na-eche.
Ndị na-eme egwuregwu anabolic nke ndị na-eme egwuregwu na-eji nwere ike imeziwanye mmụba ahụ nke ọma ma mmetụta dị n'akụkụ nke ọgwụ ndị a, dị ka mbelata testicular size n'ihi testicular atrophy na infertility, dị nnọọ ukwuu karịa uru nke ọgwụ. Nke a bụ ya mere ọ dị mkpa ka ịchọọ ụzọ ọzọ, na Urolitin A nwere ikike yiri ya ma ọ bụ ụbara, ma e jiri ya tụnyere ya, nke ọ na-eme ka uru ahụ dịkwuo mma. Otú ọ dị, mmetụta dị n'akụkụ nke Urolithin A adịghịdị nso ịdị njọ dị ka mmetụta nke steroid.
Urolithin A. bụ ihe mgbakwunye dị mma na nke dị mma yana uru mgbochi ịka nká, metabolic, neuroprotective, na mgbochi oke ibu. Dị ka ọmụmụ ndị e mere iji nyochaa uru nke mgbakwunye ahụ, ọ dị mma maka iji mmadụ mee ihe. Ọzọkwa, enweghị nsí ma ọ bụ mmetụta ọjọọ a kọrọ, ruo taa. Iri ngwaahịa ziri ezi na usoro ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị nwere ike inye aka belata ihe ize ndụ nke mmetụta ọ bụla nwere ike ime nke ọma.
Urolithin A, kemgbe achọpụtara ya na 2000s, a mụọla nke ọma maka abamuru ya dị ka mmụba akwara na ikike ime ka ntachi obi dịkwuo elu. Otú ọ dị, enwere uru ole na ole ọzọ nke ogige ahụ bụ nke a chọtara n'ihi nyocha ndị a, ma a kpọtụrụ ha n'okpuru:
Njikwa nsogbu nke metabolic
Mgbe ha na-anwale ikike nke mgbakwunye Urolithin iji kwalite ntachi obi na ndị agadi, ndị nchọpụta chọpụtara na metabolite ahụ belatara nke ukwuu ọnụ ọgụgụ ceramides na acylcarnitine n'ime ahụ. Ihe ndị a na-emetụtakarị na ọrịa metabolic nke na-elekwasị anya na mitochondria. N'ihi ya, e kwubiri na urolithin A nwere ike inye aka ijikwa nsogbu metabolic mitochondrial.
Ọ bụ ezie na uru a nke Urolithin A na-emeju adịghị adọrọ mmasị dị ka ike ya na-eme ka uru ahụ dịkwuo elu, ọ dịkwa mkpa. Dị ka nnyocha e mere na ụdị anụmanụ, a chọpụtara na iji metabolite emelitere ihe mgbaàmà nke Alzheimer's, ọ bụ ezie na a na-achọkwu nnyocha tupu e jiri ya dị ka ọkọlọtọ ụdị ọgwụgwọ.
Mmetụta mgbochi oke ibu
A mụrụ Urolithin A n'ihu maka uru metabolic ya mgbe achọpụtara otu n'ime uru ya na mberede n'oge ọmụmụ ihe a na-eme iji nyochaa iji Urolithin A na-emewanyewanye ntachi obi n'etiti ndị agadi.
A mụrụ ụdị anụmanụ na nri nwere oke abụba ma ọ bụ HFD ka enyere ha mgbakwunye Urolithin A. Urolithin A n'ime ụmụ oke ndị a buru oke ibu kpatara nchara nchara nke anụ ahụ adipose ọcha na mgbe ahụ, Urolithin A kwalitere thermogenesis nke anụ ahụ adipose aja aja, gbazee abụba pụọ. Urolithin A abụghị naanị na-agbaze abụba ahụ mana achọpụtakwara na ọ na-egbochi ibu ibu n'etiti oke ndị e nyere HFD nri. Mmetụta metabolic na mgbochi oke ibu nke Urolithin A ntụ ntụ nwere ike imeghe ụwa ọhụrụ nke ohere na ojiji maka metabolite.
Kedu ihe bụ Urolitin A (UA)?
Urolithin A bụ ngwakọta organic nke sitere na ellagitannins sitere na microbiota dị na eriri afọ. Urolithins bụ ogige aromatic polycyclic nke bụ metabolites etolite site na mmalite dị ka ellagic acid na ellagitannins, nke dị na mkpụrụ osisi sitere n'okike dị ka pọmigranet.
Bee pọmigranet bara ụba na ya Urolithin B. ebe Urolitin A enweghị isi nri nri. Kama nke ahụ, a na-emepụta ya site na ntughari nke tannins dị na mkpụrụ osisi site na eriri afọ. Ekwuru ihe mejupụtara isi mmalite nri nke ellagitannins na tebụl dị n'okpuru. Isi nri nri ndị a na-arụ ọrụ dị ka isi mmalite na-apụtaghị ìhè nke Urolithin A, n'ihu ọnụnọ microbiota dị mma nke nwere ike ịrụ usoro ntụgharị.
Isi nri Ellagic acid
Ysmụ okorobịa 70
Igwe ojii 315.1
Jam mkpụrụ osisi strawberry 24.5
raspberries odo odo 1900
Ihe ọ juiceụ Pụ pọmigranet 811.1
Wine na-acha ọbara ọbara 33
Uhie raspberries 8.7
Ysmụ okorobịa 30
Kedu ka Urolithin-A si arụ ọrụ n'ịkwalite akwara?
Urolithin A ewegharala ọnọdụ steroid n'ahịa n'ihi na ha nwere nchekwa na ike ịkwalite akwara. Urolithin A na-ebubata na-akwalite ojiji nke mgbakwunye a n'ihi ọtụtụ uru nke ngwaahịa ahụ, nke kachasị mkpa bụ uto muscle. Ike akwara, uto, na ntachi obi dabere na ọrụ mitochondrial dị na sel. Mitochondria bụ ike nke cell, na ha na-ahụ maka mmepụta nke ATP, nke bụ ego ike nke ahụ.
-Emelitere ike akwara na ndị agadi
Ka otu afọ, ike akwara, nha, na ntachi obi na-ebelata nke ukwuu. Enwere ike ịta ya ụta maka mbelata ọrụ mitochondria yana mkpokọta mitochondria na-ada ada. Mbelata a na mitophagy na-ekere òkè dị mkpa n'igbochi ndị agadi ime ihe omume na ọrụ ndụ kwa ụbọchị. Achọpụtala ihe ngwọta maka nsogbu a bụ Urolithin A ntụ ntụ.
Enwere ọmụmụ ihe ọzọ nke e mere iji chọpụta mmetụta nke Urolithin A na ike ike na ntachi obi na ndị agadi, bụ ndị na-enweta mbelata nke ọrụ mitochondrial na afọ.
Dị ka ndị nchọpụta na-eme nnwale ụlọ ọgwụ si kwuo, e nwere mkpebi nke mitophagy na-ada ada n'etiti ndị sonyere na ọmụmụ ihe ahụ, na-egosi nkwụsị nke mitochondria na-adịghị arụ ọrụ na nkwalite ahụike mitochondrial n'ozuzu ya. Tụnyere otu ndị natara placebo, ndị sonyere nyere ihe Urolitin A mgbakwunye kọrọ mmụba dị ịrịba ama nke ntachi obi na ike nke mọzụlụ na ụkwụ na ogwe aka. Enwere mbelata ike ọgwụgwụ yana mmụba zuru oke na ikike ịrụ ọrụ kwa ụbọchị.
Ndị nchọpụta achọpụtakwara na mgbakwunye Urolithin A nwere ike ịbụ ụzọ ọzọ iji meziwanye ike na ume ike n'etiti ndị agadi na-enweghị ike ịme mgbatị ahụ n'ihi nsogbu ahụike anụ ahụ ma ọ bụ nke uche. Dị ka Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa ma ọ bụ CDC si kwuo, mmega ahụ kwa ụbọchị nwere ike inyere aka ịlụso nsogbu ndị na-agagharị agagharị ọgụ, ịdaba ihe ize ndụ, na nsogbu mmegharị ndị ọzọ na ndị agadi. Otú ọ dị, mgbe nke a agaghị ekwe omume, ịṅụ ihe mgbakwunye Urolithin A nwere ike iweta mitophagy na ọkwa nkịtị, ya mere, na-enwe otu mmetụta ahụ dị ka mgbatị ahụ.
-Nchịkwa nke Duchenne Muscular Dystrophy
Agbanyeghị, n'ọrịa muscular degenerative dị ka Duchenne Muscular Dystrophy ma ọ bụ DMD, ọdịnaya mitochondrial nke mkpụrụ ndụ nwere ntụpọ na mitochondria dị ugbu a anaghị arụ ọrụ nke ọma. Ọzọkwa, na DMD, mitophagy na-ebelata nke ukwuu, nke bụ usoro ahụ anyị si ewepụ mitochondria na-adịghị arụ ọrụ ma megharịa ọdịnaya iji gboo mkpa anụ ahụ dị elu.
Otu n'ime nyocha ndị e mere iji mụọ mmetụta nke Urolitin Otu ntụ ntụ na-eto eto na-elekwasị anya na mmetụta nke mbụ nwere na mitophagy. Ndị nchọpụta chọpụtara na mgbakwunye na Urolithin A mere ka ọkwa mitophagy dịkwuo mma, na-eweghachi ha azụ azụ na ndị ọrịa muscular dystrophy. A hụrụ nsonaazụ ndị a na ụdị anụmanụ na ihe gbasara mmadụ, na-egosi na enwere ike iji Urolithin A mee ihe nke ọma iji jikwaa mgbaàmà nke dystrophy muscular. Ọzọkwa, ndị nchọpụta dekọrọ ịrị elu pasent 40 n'ọ̀tụ̀tụ̀ ịdị ndụ nke ụdị anụmanụ nyere ihe mgbakwunye Urolithin A ma e jiri ya tụnyere ndị na-enwetaghị mgbakwụnye ahụ. Ike njide na ike ịgba ọsọ mụbara site na 31 pasent na 45, n'otu n'otu, n'ụdị anụmanụ ndị a.
Uru ọzọ dị mkpa nke Urolithin A na-ahụta n'oge ọmụmụ ihe a bụ na ọ na-ebelata fibrosis ma ọ bụ ọnya obi na diaphragm nke ụmụ oke na DMD. Nke a bụ ihe mgbagwoju anya dị mkpa nke DMD nke enwere ike ijikwa ya ugbu a Urolitin A ntụ ntụ.
Ebe ị ga-azụta Urolithin A (UA) ntụ ntụ kacha mma n'ịntanetị?
Enwere ọtụtụ ndị na-eweta Urolithin A n'ịntanetị nwere webụsaịtị ha raara onwe ha nye enwere ike ịhọrọ ịzụta metabolite. Ndị na-ere ahịa n'ogbe na-enye ndị ọrụ ohere ịzụta Urolithin A ntụ ntụ n'ịntanetị, yana nnyefe dị mma na n'oge. Ndị na-ere ahịa a na-emeso naanị ntụ ntụ, ọ bụghịkwa ihe mgbakwunye ndị a na-eme na metabolite. Enwere ike zụta mgbakwunye Urolitin A ozugbo site na ika ị họọrọ ma ọ bụ site na Amazon.
Tupu ịzụrụ n'ùkwù ma ọ bụ ihe mgbakwunye, a na-atụ aro ka ịlele nyocha nke ngwaahịa ahụ iji hụ na a na-azụta ngwaahịa mbụ, dị ike na nke dị irè. Enwere ọtụtụ dupes na ahịa na mgbe ụfọdụ, ngwaahịa a na-azụta nwere ike imerụ ya na ihe ndị ọzọ ma ọ bụ nsị. Ọ kacha mma ịme nyocha nke ọma nke nchekwa na ịdị ọcha nke Urolithin A ntụ ntụ tupu ịtụ iwu ọbụna obere ego.
Otu esi eji Urolithin A (UA) ntụ ntụ?
Urolithin A na-enweta n'ụdị dị iche iche dịka ntụ ntụ ma ọ bụ capsules gel dị nro. Na-enye iwu ozugbo site na urolithin. Onye na-ebubata ngwaahịa nwere ike ime ka ọ dịrị gị mfe ịhọrọ ụdị mgbakwunye kwesịrị ekwesị maka onwe gị. Ozugbo ekpebiela ụdị ahụ, ọ dị mkpa ịhọrọ usoro ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị maka onwe gị. Ọ dị mkpa iburu n'uche na Urolithin A ntụ ntụ kwesịrị ịṅụ naanị otu ugboro n'ụbọchị, na nke ọ bụla dose dị gburugburu 500mg.
E nwere ọtụtụ isi nri nri nke Urolithin A mana ezughị iji iri nri ndị bara ụba na precursors na Urolithin A. A ga-enwerịrị ụdị nje nje abụọ dị na eriri afọ maka ellagitannins ka metabolized na Urolithin A. Abụọ ndị a. ụdị bụ, Gordonibacter pamelaeae (DSM 19378T) na Gordonibacter urolitinfaciens (DSM 27213T).
Ọ bụrụ na ụdị ndị a adịghị na eriri afọ, mgbe ahụ onye ọ bụla metụtara ahụ agaghị enwe mmepụta nke Urolithin A n'ime ahụ. Ndị dị otú ahụ kwesịrị ịṅụ ihe mgbakwunye iji mejupụta enweghị ntụgharị Urolitin n'ime ahụ.
Kedu nsonaazụ anyị nwere ike ịhụ mgbe urolithin-A ntụ ntụ gasịrị?
Urolitin E gosiputara A, site na nyocha na nyocha sayensị, inwe mmetụta mgbochi ịka nká na ike, nha, na ntachi obi. A na-akwado uru niile site na ihe akaebe sayensị na oge kacha nta nke emere ọmụmụ ihe ndị a bụ ọnwa anọ. Ọmụmụ ihe ahụ were ọnwa anọ ma ọ bụ karịa, ọtụtụ ndị nchọpụta kwuru na mgbakwunye Urolithin A chọrọ opekata mpe ọnwa anọ iji mepụta uru mitophagy na metabolic.
Guada M, Ganugula R, Vadhanam M, Ravi Kumar MNV. Urolithin A na-ebelata Nephrotoxicity nke Cisplatin butere site na igbochi mbufụt gbasara akụrụ na Apoptosis n'ụdị oke nnwale. J Pharmacol Exp Ther. 2017;363 (1): 58-65 . doi:10.1124/jpt.117.242420.
 "FDA GRAS ọkwa GRN Nke 791: urolithin A". Nchịkwa nri na ọgwụ US. 20 Disemba 2018. eweghachiri 25 Ọgọst 2020.
 Landete JM (2011). "Ellagitanins, ellagic acid na metabolites ha enwetara: nyocha banyere isi iyi, metabolism, ọrụ na ahụike." Nchọpụta Nri Mba Nile. 44 (5): 1150–1160. doi:10.1016/j.foodres.2011.04.027.
 Johanningsmeier SD, Harris GK (2011-02-28). "Pomegranate dị ka nri na-arụ ọrụ na isi ihe na-edozi ahụ". Nyochaa Kwa afọ nke Sayensị nri na teknụzụ. 2 (1): 181–201 . doi: 10.1146 / anurev-nri-030810-153709. PMID 22129380.
Han QA, Yan C, Wang L, Li G, Xu Y, Xia X. Urolithin A na-eme ka ox-LDL kwụsị ọrụ endothelial akụkụ site n'ịgbanwe microRNA-27 na ụzọ ERK/PPAR-γ. Mol Nutr Nri Res. 2016;60 (9): 1933-1943 . doi:10.1002/mnfr.201500827.
AASraw bụ onye nrụpụta ọkachamara nke Urolithin A (UA) ntụ ntụ nke nwere ụlọ nyocha onwe ya na nnukwu ụlọ ọrụ dị ka nkwado, a ga-eme mmepụta niile n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro njikwa mma. Usoro ọkọnọ ahụ kwụsiri ike, ma ndị na-ere ahịa na ndị na-ere ahịa na-anabata.Nabata ịmụtakwu ozi gbasara AASraw!
Site na Reddit & Quora: Ajụjụ 12 (arụmụka kpụ ọkụ n'ọnụ) gbasara NMN Nkwupụta ịhụnanya nke Phosphatidylserine (PS) ntụ ntụ maka mmadụ